Soomaaliya iyo Somaliland: Heshiis Cusub, oo Hore oo Lagu Gaaray Djibouti – Goobjoog News
Soomaaliya iyo Somaliland: Heshiis Cusub, oo Hore oo Lagu Gaaray Djibouti
Shirkii wada-hadalada ee Soomaaliya iyo Somaliland uga socday Jabuuti ayaa xalay labada dhinac waxay gaareen heshiis cusub, oo hore.
Arrimaha la isla ogolaaday ee la saxiixay ma aha qaar cusub, oo waa qodobbo horay loogu heshiiyey 2012-kii iyo 2014-kii, laakin aan la hirgelin taasi oo keentay in mar kale lagu celiso sida:
Sidii loo sii wadi lahaa shirarka mustaqbalka si qurux badan oo hadaf xanbaarsan
Sidii dib loogu dhisi lahaa Kalsoonidii labada dhinac.
Sidii loo meel marin lahaa qodobadii lagu heshiiyey shirarkii hore ee aan la hirgelin sida Kaalmooyinka Dhaqaale ee Caalamiga ah iyo Gargaarada Bani-aadamnimo, waxaana qodobkaasi loo saaray guddi, kuwaasi oo shiridoona muddo shan iyo toban cisho (15) ka dib ah, kuna shiridoona waddanka Jabuuti.
Waxaa ay labada dhincba soo saareen guddi ka wada xaajoon doona Arrimaha Hawada, kuwaasi oo muddo shan iyo toban cisho ah ku shiridoona waddanka Jabuuti.
Waxaa ay labada dhinacba soo saareen guddi saddexaad oo ka wada shaqayn doona Arrimaha nabad-gelyada.
Dhamman Saddexdaa guddi shan iyo toban cisho ka dib waxay ku kulmi doonaan Jabuuti, waxaana lagu magacaabay guddiyadaasi (Technical sub comment) Guddida guud ee farsamado ee wada-hadalada oo lagu magacaabo (Joint Ministerial Committee), waxaanay 45-cisho ka dib ku kulmi doonaan Jabuuti si u qiimeeyaan wax qabadka guddi hoosaadyada.
Madaxweynaha Galmudug oo Soo Dhoweyn Loogu Sameeyey Degmada Hobyo
Ibraahim Geedow “ Xulka Qaranka Uma Baahan Macallimiin Ajaanib Ah Oo Qaata Dhaqaale Badan ”
3 Qof oo uu Cunug Dhallaan Ku Jiro Oo Lagu Dilay Muqdisho